Muscle Hypertrophy- အစားအသောက်၊ ဖြည့်စွက်စာများနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းလမ်းညွှန် - ဖြည့်စွက်စာ ဘရာဇီး
ဧပြီလ 13, 2022 မေလ 9, 2022
muscle hypertrophy ဆိုတာဘာလဲ
Hypertrophy: ဘာလို့ လေ့ကျင့်တာလဲ။
hypertrophy လုပ်ဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ
Hypertrophy လေ့ကျင့်ရေးစီးရီးက ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သင့်သလဲ။
hypertrophy 5kg ရဖို့ ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
အမြန် hypertrophy အကြံပြုချက်များ
hypertrophy အတွက် အကောင်းဆုံးအစားအစာ- မှန်ကန်စွာစားနည်းကို လေ့လာပါ။
ခြေသလုံးကြွက်သားများ ဖောက်ပြန်ခြင်းအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းများ
Crossfit တွင် hypertrophy လုပ်နည်း
hypertrophy ခြေထောက်များအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းများ
Hypertrophy နှင့် ကယ်လိုရီလိုငွေပြခြင်း။
ကြွက်သား hypertrophy အတွက် အကောင်းဆုံး steroid ကဘာလဲ။
Hypertrophy နှင့် thermogenic
Hypertrophy နှင့် အဓိပ္ပါယ်
စာဖတ်ချိန်-7မိနစ်
A သွေးတိုးရောဂါ ကြွက်သား ဗေဒင်မေးခွန်းကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပိုပိုပြီး အလေးထားသော လူများစွာအတွက် ပန်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့ရင်တောင် ဒီလူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ပင်မရည်မှန်းချက်ကို ဘယ်လိုအောင်မြင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ သံသယများစွာရှိကြတာက ပုံမှန်ပါပဲ။
တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်ဆက်စပ်သော ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော hypertrophy လုပ်နိုင်သောနည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ အစာ နှင့် သီးခြားဖြည့်စွက်စာများ အသုံးပြုခြင်း။
hypertrophy လုပ်နည်းကို သိလိုသူများအတွက် ဤစာသားကို အဆုံးအထိ လိုက်နာပါ။
A ကြွက်သား hypertrophy လေ့ကျင့်ခန်းကဲ့သို့သော ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းများဖြင့် အောင်မြင်နိုင်သည့် ကြွက်သားများ ကြီးထွားမှုထက် မပိုပါ။ ကျန်းမာသန်စွမ်းအားကစားeခန္ဓာကိုယ်.
ကြွက်သားမျှင်များဖြင့် ခံစားရသော ဒဏ်ရာအသေးစားများမှတဆင့် ဖြစ်ပွားသည်။ လေ့ကျင့်ရေး ခွန်အားနှင့်နောက်ဆုံး ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကြွက်သားကြီးထွားမှုကို အားပေးသည်။ muscle hypertrophy ဆိုတာ ဘာလဲ။.
Hypertrophy ဆိုတော့ လေ့ကျင့်တယ်။လေ့ကျင့်ရေးသည် တစ်စုံတစ်ဦးအတွက် ကောင်းမွန်သော hypertrophy ရရှိရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်၊ ပြီးနောက် အားလုံးမှာ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ လေ့ကျင့်နေစဉ်အတွင်း ကြွက်သားမျှင်များ ပြိုကွဲကာ ၎င်းတို့ကိုယ်၎င်း ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းကာ ကြွက်သားများ တိုးပွားလာစေသည်။
hypertrophy လုပ်ဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ ? က ကြွက်သား hypertrophy အဓိကအားဖြင့် အမျိုးအစား2၏ကြွက်သားမျှင်များ၊ ကျုံ့မြန်သော လေ့ကျင့်ခန်းများကို လုပ်ဆောင်သူများမှ ရရှိသည်။
သို့သော် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် လိုချင်သောရလဒ်များရရှိရန် စားသုံးရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ အာဟာရဓာတ် ပရိုတင်းများကဲ့သို့သော သီးခြား
၎င်းတို့သည် အမိုင်နိုအက်ဆစ်များဖြစ်ပြီး ကြွက်သားများစုစည်းမှုနှင့် ပေါင်းစပ်မှုတွင် ကူညီပေးမည့် အမိုင်နိုအက်ဆစ်များကို ပံ့ပိုးပေးမည့် အာဟာရတစ်မျိုးဖြစ်သည့် အစားအစာမပါဘဲ ပုံမှန်အဆက်မပြတ် လေ့ကျင့်နေသော်လည်း ကြွက်သားရရှိရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။
hypertrophy ကိုအောင်မြင်လိုသူသည် မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များကိုရရှိရန် မည်သည့်အဆင့်များဖြစ်သည်ကို တွေးတောနေဆဲဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ သင့်အတွက် ကွဲပြားခြားနားမှုအားလုံးကို ဖြစ်စေမည့် အကြံပြုချက်အချို့ ဖြစ်သည်-
စားသုံး အစာ ဥပမာ- ကြက်ဥနှင့် ကြက်ကဲ့သို့သော ဇီဝတန်ဖိုးမြင့်မားသော ပရိုတင်းဓာတ်များ ကြွယ်ဝသည်။
ကိုယ်အလေးချိန် လေ့ကျင့်ခြင်းကဲ့သို့သော ကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကာယလေ့ကျင့်ခန်းများ အထူးသဖြင့် ခွန်အားဖြစ်စေသော လေ့ကျင့်ခန်းများကို လေ့ကျင့်ပါ။
ကြွက်သားတည်ဆောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသော ပရိုတင်းဓာတ်ကဲ့သို့သော ဖြည့်စွက်စာများ စားသုံးမှုတွင် သင်၏နေ့စဉ်ပုံမှန်ပါဝင်ပါ။
>>> ဖတ်ရန် Acai berry သီး: အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာတွေလဲ။ သင်တကယ်အဆီရသလား ငါလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူတန်းစီနိုင်သလား?
ကြွက်သားများ ကြီးထွားလာပြီး ကြွက်သားများ ကြီးထွားလာစေသည်။ ကြွက်သားထု ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် ရည်ရွယ်၍ လေ့ကျင့်မှု ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခြင်း ပါဝင်သည်။ hypertrophy အတွက် စီးရီးက ဘယ်လိုလဲ။.
ဤအရာသည် အကောင်းဆုံးရလဒ်များနှင့်အတူ ပိုကြီးသော hypertrophy ကိုမြှင့်တင်ရန် ကူညီပေးသည့် drop set လေ့ကျင့်ရေးနှင့် ပိရမစ်လေ့ကျင့်ရေးကိစ္စဖြစ်သည်။
Pyramid Training သည် ၎င်းတို့၏ hypertrophy ပန်းတိုင်သို့ စတင်ရောက်ရှိနေသူများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီး drop-set training သည် အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားသူများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် ပိုမိုပြင်းထန်သော နည်းစနစ်များ လိုအပ်ပြီး ဒဏ်ရာဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများသောကြောင့် စတင်အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့ကြောင့် အလွန်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။
လေ့ကျင့်ခန်းစီးရီးများ၏ စည်းကမ်းချက်များအရ hypertrophy အတွက် အစွန်အဖျားမှာ စီးရီးတစ်ခုစီတွင်6နှင့် 12 ကြား ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
အထပ်ထပ်6ကြိမ်သည် 18 စက္ကန့်မှ 24 စက္ကန့်ကြားရှိသင့်ပြီး 12 ထပ်ခါထပ်ခါတစ်အုပ်သည် 36 နှင့် 48 စက္ကန့်ကြားရှိသင့်သည်။
လူတော်တော်များများက သိချင်ကြပါတယ်။ hypertrophy 5kg ရဖို့ ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။တစ်စုံတစ်ဦးကို hypertrophy5ကီလိုဂရမ်တက်ရန်အချိန်အတွက်တိကျသောစည်းမျဉ်းမရှိပါ၊ ၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောအချက်များနှင့်လူတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်။
အသက် 20 မှ 25 နှစ်ကြား အမျိုးသားတစ်ဦးအတွက် ခန့်မှန်းခြေအချိန်သည် ကြွက်သား4ကီလိုဂရမ် ခုန်တက်စေရန်5လမှ5လအထိဖြစ်သည်။
အောက်တွင်အချို့ကိုကြည့်ပါ။ လျင်မြန်သော hypertrophy အတွက်အကြံပြုချက်များ ပိုမြန်အောင်လုပ်ပါ-
supercompensation- ယခင်လေ့ကျင့်မှုမှ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်းမရှိပဲ လေ့ကျင့်မှုအသစ်ကို စတင်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၊ ၎င်းသည် အခြေခံအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ကြွက်သားတိုးပွားခြင်း လုံလောက်ပါတယ်။
Overload နိယာမ- ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ကြွက်သားများသည် လှုံ့ဆော်မှုများနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိလေလေ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်လာလေဖြစ်သည်။ ကြွက်သားအုပ်စုတစ်ခုအတွက် ဝန်များ သို့မဟုတ် ထပ်ခါတလဲလဲ ပမာဏ သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်ခန်းအရေအတွက်ကို ချိန်ညှိရန် လိုအပ်သည်
ကွဲပြားမှု- လူ့သက်ရှိများသည် မိမိကိုယ်မိမိ ကာကွယ်ရန် အမြဲကြိုးစားနေသောကြောင့် ၎င်းသည် လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတွင် လျင်မြန်စွာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ကြွက်သားများ ဖွံ့ဖြိုးစေရန် တွန်းအားပေးသည့် လေ့ကျင့်ခန်းများကြားမှ ပြန်လည်ရယူချိန် သို့မဟုတ် အစုံလိုက် အထပ်ထပ် ပမာဏကို ပြုပြင်သင့်သည်။
A ကြွက်သား hypertrophy လူတစ်ဦးချင်းစီ မှန်ကန်စွာ စားသောက်သောအခါတွင် ရရှိနိုင်ပြီး ၎င်းတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော စားသောက်မှုပုံစံပါ၀င်သည်၊ hypertrophy အတွက်အကောင်းဆုံးအစားအစာ ပရိုတင်းနှင့် မပြည့်ဝဆီများ စားသုံးမှုအပေါ် ပိုမိုအာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့်။
>>> ဖတ်ရန် Agave: မင်းရဲ့အစားအစာကိုချိုစေပြီးကယ်လိုရီနည်းနည်းစားပါ။
ထို့အပြင် ဆိုဒီယမ်၊ သကြားနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အစားအစာများ ကဲ့သို့သော ကြွက်သားများ ကြီးထွားမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သော အစားအစာများ စားသုံးခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
ခြေသလုံးကြွက်သားများ သည် လူများ အလွန်အမင်း ဖောက်ပြန်ချင်သော အရာများထဲတွင် ပါဝင်သော်လည်း အနည်းဆုံး ရလဒ်ကောင်းများ ရရှိနိုင်သည်။ ဒါတွေကတော့ ခြေသလုံးကြွက်သားများ ကြီးထွားခြင်းအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းအကြံပြုချက်များ :
ဘားဖြင့် စိုက်ခင်းကို ကွေးညွှတ်ကာ ထိုင်သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် ခေတ်စားဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကြွက်သားများ ကြီးထွားမှုအတွက် ရလဒ်ကောင်းများ ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်မှာ Crossfit ဖြစ်သည်။ crossfit တွင် hypertrophy ကိုမည်သို့ပြုလုပ်မည်နည်း။.
ဥပမာအားဖြင့်၊ မြင့်မားသောဝန်နှင့် ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်း ပြင်းထန်မှုဖြင့် အလုပ်မလုပ်သော်လည်း၊ ဤလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားကို လေ့ကျင့်သူများသည် အချိန်တိုတိုအတွင်း ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုများကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။
Leg hypertrophy သည် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများကြားတွင် အမြဲတမ်းကြီးမားသော ရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် အချို့သောသူများရှိပါသည်။ ခြေထောက် hypertrophy လေ့ကျင့်ခန်း ဒီလိုရလဒ်မျိုးကို လိုချင်သူတွေ အမြဲတမ်း လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်တယ်။
hypertrophy လုပ်ချင်သူတွေ၊ အများစုဟာ တပြိုင်နက်တည်း လုပ်ချင်ကြပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ဤပန်းတိုင်များကို အောင်မြင်ရန် နည်းလမ်းရှိပါသည်။
ကြွက်သားများ တိုးလာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လေ့ကျင့်ထားသော လေ့ကျင့်ခန်း အများအပြားသည် အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
သင့်ခန္ဓာကိုယ် ကြွက်သားထုထည် ကြီးလေလေ၊ အင်အား လှုပ်ရှားစရာမလိုဘဲ ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းစေမည့် အနားယူရန် လိုအပ်ပါသည်။
A အဆီဆုံးရှုံး နှင့် hypertrophy သည် သင်စားသုံးသည်ထက် ကယ်လိုရီပိုမိုလောင်ကျွမ်းစေမည့် မဟာဗျူဟာနည်းလမ်းကို ကျင့်သုံးရန် လိုအပ်သော်လည်း သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ သင့်ကြွက်သားများကို စွမ်းအင်အတွက် အသုံးမပြုဘဲ ၊
ထို့ကြောင့် ပရိုတင်းဓာတ်ကြွယ်ဝသော အစားအစာများ စားသုံးမှုကို တိုးမြှင့်ရန်နှင့် ရှုပ်ထွေးသော ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ပါသော အစားအစာများကို အမြဲစားရန်၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ကို ကောင်းစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် လိုအပ်သည်။
O SARMs အကောင်းဆုံးတွေပါ။ steroids များများရချင်သူများအတွက် ကြွက်သား hypertrophyအဖြစ်အလုပ်လုပ်သော androgen modulator တစ်ခုဖြစ်သည်။ steroid ခန္ဓာဗေဒ muscle hypertrophy အတွက် အကောင်းဆုံး steroid က ဘာလဲ။
Thermogenics များသည် hypertrophy ကို အရှိန်မြှင့်လိုသူများအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဇီဝြဖစ် အဆီပိုလောင်ကျွမ်းမှုကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့အပြင် စွမ်းအင်ပိုပေးပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ လိုလိုလားလားကို ယူဆောင်လာပေးပါတယ်။ hypertrophy နှင့် thermogenic.
အချို့သော thermogenics များ၊ ပီရူး Macaပိုကြီးသော ထုတ်လုပ်မှုကို နှိုးဆွပေးခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားများ တိုးပွားလာမှုအပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ testosterone ဟော်မုန်း.
hypertrophy ဘယ်ဟာလဲ။ ဖြည့်စွက် ယူ
ယခုခေတ်တွင် ပိုမိုထိရောက်မှုရှိသော ဖြည့်စွက်စာများစွာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ကြွက်သား hypertrophy ဖြည့်စွက်အားဆေးသောက်ရန် hypertrophy :
BCAA: ဒါကအစုံပါပဲ။ မရှိမဖြစ်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်မှ မထုတ်လုပ်နိုင်သောအရာများနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားများ တည်ဆောက်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေသော ပရိုတင်းဓာတ်များ ပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အရာများ၊
whey ပရိုတိန်း: whey ပရိုတင်းမှထုတ်လုပ်ထားသော ပရိုတင်းဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အမိုင်နိုအက်ဆစ်နှင့် ဇီဝပရိုတင်းဓာတ်များ မြင့်မားစွာပါ၀င်သည်။ သွေးတိုးရောဂါ ကြွက်သား
တီထွင်: ဤဖြည့်စွက်စာသည် ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချိန်တွင် စွမ်းအင်ပိုမိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့်အပြင် ကြွက်သားများပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့် ကြွက်သားပေါင်းစပ်မှုကိုလည်း အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။
>>> ဖတ်ရန် ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူများ၏လျှို့ဝှက်ချက် - သင်တစ်ခါမျှမသင်ကြားခဲ့သည့်နည်းစနစ်များကိုလေ့လာပါ။
ဤသည်မှာ တိုးမြင့်ကူညီပေးသော ဟော်မုန်းလိုလားသော ဖြည့်စွက်စာများအတွက် အကြံပြုချက်အချို့ဖြစ်သည်။ ကြွက်သား hypertrophy.
၎င်းသည် အချိန်တိုတိုအတွင်း ကြွက်သားထုထည် 8 ကီလိုဂရမ်အထိ တိုးလာစေရန် အာမခံချက်ပေးသော ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ ဟော်မုန်းအကြို ဟော်မုန်းဓာတ်တစ်မျိုးအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
h stane ဝယ်သည်။
၎င်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရေပန်းအစားဆုံး ဟော်မုန်းဖြည့်စွက် ဖြည့်စွက်စာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကြွက်သားထုထည်၊ ထုထည်နှင့် သိပ်သည်းဆကို တိုးမြှင့်ပေးကာ ရေဓာတ်ထိန်းထားမှုမရှိဘဲ ခြောက်သွေ့သော ကြွက်သားများ ရရှိရန် အာမခံပါသည်။
m drol ဝယ်သည်
Alpha m1 သည် ခန္ဓာကိုယ်မှ metabolized ပြီးနောက် testosterone အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသော pre-hormonal တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရက် 8 တွင်ကြွက်သား 30 ကီလိုဂရမ်အထိတိုးလာသည် (၎င်း၏အသုံးပြုမှုသည်တစ်လထက်မပိုသင့်ပါ) ။
alpha m1 ကိုဝယ်ပါ။
ခြားနားချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ hypertrophy နှင့်အဓိပ္ပါယ် musculature နှင့် မသိပါက ဝေါဟာရ တစ်ခုစီ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို အောက်တွင် ကြည့်ပါ။
Hypertrophy ကိုရည်ညွှန်းသည်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမြတ် ကြွက်သား ဆိုသည်မှာ ကြွက်သားများကို တည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ပိုကြီးလာပါသည်။
ကြွက်သားအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကြွက်သားတွေကို ပုံဖော်ရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အဆီ % ကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကြွက်သားတွေကို သတ်မှတ်သတ်မှတ်တဲ့အခါ၊
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း လူတွေက အချိန်နည်းပြီး ကြွက်သားထုထည် ပိုရချင်ပေမယ့် ဒီရလဒ်တွေရဖို့ သူတို့ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ အတိအကျ နားမလည်ကြဘူး။
ဤစာသားတွင်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအာဟာရ၊ ဖြည့်စွက်ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်းနှင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများလေ့ကျင့်ခြင်းတို့ကို အချိန်နည်းပြီး ကျန်းမာသောနည်းလမ်းဖြင့် မည်သို့ဖြစ်နိုင်သည်ကို သင်လေ့လာခဲ့ပါသည်။
ဒီနေ့ ဆောင်းပါးကို ကြိုက်လား။ ကြွက်သား hypertrophy: ဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲ။ အစားအသောက်များတွင်၊ ဖြည့်စွက်စာ နှင့် လေ့ကျင့်ခန်း ?
ဒေါက်တာ Larissa Scharf အာဟာရပညာရှင်
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာဟာရ၊ အားကစားနှင့် Phytotherapy ဘွဲ့လွန်
—– တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု အချက်အလက် (အွန်လိုင်းနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်)—–
Tags:hypertrophy အတွက် စီးရီးက ဘယ်လိုလဲ။crossfit တွင် hypertrophy ကိုမည်သို့ပြုလုပ်မည်နည်း။လျင်မြန်သော hypertrophy အတွက်အကြံပြုချက်များခြေသလုံးကြွက်သားများ hypertrophy လေ့ကျင့်ခန်းခြေထောက် hypertrophy လေ့ကျင့်ခန်းhypertrophy နှင့်အဓိပ္ပါယ်hypertrophy နှင့် thermogenicကြွက်သား hypertrophyhypertrophy ဆိုတော့ လေ့ကျင့်တယ်။ဖြည့်စွက်အားဆေးသောက်ရန် hypertrophyhypertrophy အတွက်အကောင်းဆုံးအစားအစာmuscle hypertrophy ဆိုတာ ဘာလဲ။hypertrophy လုပ်ဖို့ဘာလုပ်ရမလဲmuscle hypertrophy အတွက် အကောင်းဆုံး steroid က ဘာလဲ။hypertrophy 5kg ရဖို့ ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။